Budata vidiyo Dailymotion ➵ Budata 4k vidiyo, vidiyo 1080p, HD vidiyo, ndepụta okwu, ntanaka ederede, akwụkwọ mmado, ihe nkiri, mkpado site na Dailymotion
Na-eji nke ochie. Pịa ebe a iji wụnye ụdị kachasị ọhụrụ 1.0.5
Budata vidiyo Dailymotion
❝Budata vidiyo site na Dailymotion na mma kachasị mma❞
➶ Budata 4k vidiyo, vidiyo 1080p, HD vidiyo, ndepụta okwu, ntanaka ederede, akwụkwọ mmado, ihe nkiri, mkpado site na Dailymotion
Detuo URL vidiyo ahụ ma mado ya n'ime igbe dị n'elu, mgbe ndị na - ebudata Dailymotion ga-ahụ vidiyo ahụ ozugbo. Pịa pịa njikọ ibudata ma chekwaa vidiyo Dailymotion na disk nke mpaghara.
Mfe Dailymotion Downloader
Mgbakwunye a na-enye gị ohere ibudata vidiyo na obere mkpado site na Dailymotion. Budata 4K vidiyo si na Dailymotion. ➥ Wụnye ugbu a
Otu esi ebudata vidio Dailymotion
Anyị nwere ike na-ekiri ihe nkiri HD Dailymotion mgbe ọ bụla ị nwere njikọ ịntanetị dị elu. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ ịkwesịrị ikiri vidiyo HD. Onye na - ebudata vidiyo a Dailymotion HD nwere ike inyere gị aka ịchekwa vidiyo HD dịka MP4 HD Ogo enweghị enweghị ogo.
Tinye URL nke Dailymotion video ma pịa bọtịnụ Download.
Nbudata vidiyo n'efu na Dailymotion na mgbakwunye Chrome na mgbakwunye Firefox
Mepee weebụsaịtị Dailymotion.
Kpọọ vidiyo na Dailymotion.
Mepee ndọtị a. ➥ Wụnye ugbu a
Dị ka YouTube, Dailymotion bụ weebụsaịtị na-ekerịta vidiyo na-eji ọtụtụ nde ndị ọrụ kwa ụbọchị. Dailymotion na-enye ndị ọrụ ohere ịgagharị na bulite vidiyo site na ịchọ mkpado, ọwa, ma ọ bụ otu ndị ọrụ mepụtara. Nwere ike ilele vidiyo na-akwụghị ụgwọ gụnyere egwu, klọọkụ, fim…
Video Downloader maka Dailymotion
Ugbu a, ọ dị mfe ibudata vidiyo Dailymotion na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Budata otutu vidiyo kwa ụbọchị
Budata vidiyo Dailymotion na otu oge. Budata ọkpụkpọ vidiyo Dailymotion ma ọ bụ ọwa naanị iji otu pịa.
Download Dailymotion thumbnail zuru ezu 1080p.
Na-akwado Usoro Ọkpụkpọ Ọtụtụ
Onye na-ebudata vidiyo Dailymotion na-eweta usoro vidiyo dị iche iche: 4K 2160p, Ultra HD 1440p, HD HD zuru ezu, 854p, HD 720p, 640p, 480p, 380p, 256p, 240p, 144p mkpebi, 256Kbps mp3.
Pịnye akara okwu na ụlọ mmanya ọchụchọ, vidiyo Dailymotion ga-egosi. Chekwaa vidiyo Dailymotion kachasị amasị gị maka iji offline rụọ ọrụ ndị a dị mfe.
Onye na-ebudata Dailymotion na-arụ ọrụ nke ọma na Google Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari, Microsoft Edge, UC Browser na ihe nchọgharị weebụ ọ bụla. Na mgbakwunye, ọ bụ ezigbo dakọtara na sistemụ arụmọrụ Mac.
Dị Mfe na ngwa ngwa
Nwee ọmarịcha nbudata ọsọ ọsọ dị mfe na enweghị nhịahụ na ịdị mma. Anyi anwaala ike anyi ime ka Dailymotion Downloader di nfe dika enwere ike.
Kwesighi ịdebanye aha ma ọ bụ nye ozi ọ bụla.
Chọta Ajụjụ Gị na Azịza Gị Ebe a - Kedu ka ị ga - esi chekwaa vidiyo Dailymotion?
+ Enwere m ike ibudata vidiyo nke m na Dailymotion?
Ọ ga - ekwe omume ibudata vidiyo nke gị na Dailymotion. Mepee Dailymotion ma bulite vidiyo gị na nkeji ole na ole ọ ga-ewepụta URL maka Vidiyo gị, detuo URL & mepee ihe ntinye vidiyo Dailymotion wee pinye URL na igbe ederede wee pịa bọtịnụ nbudata.
+ Kedụ ka m ga - esi ibudata vidiyo na ngwa Dailymotion?
Dịka weebụsaịtị anyị kwekọrọ na ekwentị gị nke ọma, ị nwere ike ịmalite usoro nke nbudata vidiyo site na Smartphone gị.
Nwere ike ibudata vidiyo Dailymotion kwa na ngwa mkpanaaka. Bugharịa na vidiyo Dailymotion, Pịa Gwuo, Pịa Nhọrọ. Wee Detuo URL nke Dailymotion vidiyo na mado na igbe ntinye ahụ wee pịa nbudata.
Ajuju ndi ozo:
Kedụ ka ị ga - esi budata vidiyo Dailymotion na ekwentị?
Kedụ ka ị ga - esi budata vidiyo site na Dailymotion na ntanetị?
+ Kedụ ka ị ga - esi budata vidiyo Dailymotion na kọmputa MAC m?
Detuo njikọ vidiyo ahụ site n'elu ihe nchọgharị weebụ gị, wee tapawa igbe igbe dị n'elu. Pịa Budata. Fim vidio ma ọ bụ ọdịyo ga - ebudata ozugbo na MAC Pc gị.
+ O kwere omume igbanwe Dailymotion na Mp3 audio?
Azịza ya bụ Ee. Ngwa anyị ga-ebudata vidiyo na akpaghị aka wee tọghatara ya gaa na faịlụ mp3.
+ Etu esi ewepu vidiyo site na Dailymotion na ama gam akporo?
Buru ụzọ wụnye ihe nchọgharị Firefox, wee pịa njikọ ndị a ka ịwụnye ndọtị a na-akpọ Download Dailymotion Videos.
Gbaa ngwa Dailymotion na ngwaọrụ gị, pịa iji kpọọ vidiyo ịchọrọ ibudata. Kpatụ na akara ngosi Ekere n'okpuru ngosipụta. Họrọ Detuo na clipboard.
Mepee taabụ ọhụụ na ihe nchọgharị Firefox. Nweta weebụsaịtị Dailymotion site na bọọdụ igodo site na mado url na adreesị adreesị.
Naanị kpatụ ihe ntụpọ atọ ahụ, wee pịa Download Video Dailymotion na menu ahụ. Họrọ ogo na usoro site na nbudata nbudata.
+ Kedụ ka m ga-esi lelee vidio Dailymotion na ntanetị na ngwaọrụ ios (iphone, ipad)?
Na etiti enyemaka nke Dailymotion gosipụtara gị ụzọ isi lelee vidiyo na-anọghị n'ịntanetị, kpatụ pịa akara atọ ahụ iji mepee vidiyo vidiyo wee pịa Pịgharịa gaa na ntanetị. Agbanyeghị, enwere ike idobe vidiyo ndị a naanị ụbọchị iri atọ tupu ehichapụ ya. Njirimara a na-arụ ọrụ naanị na ngwaọrụ IOS (chọrọ obere iOS 9) na ngwa ala Android. Yabụ na ugbu a, ndị mmadụ ga-eche na enwere ụzọ nke ga-enye anyị ohere ibudata vidiyo Dailymotion na ngwaọrụ mkpanaka anyị ruo mgbe ebighi ebi?
+ Olee otú ibudata egwu ọkpụkpọ vidiyo Dailymotion?
Needkwesiri ịwụnye ihe nchọgharị ka ịgbanye nbudata nke vidiyo na ndepụta ọkpụkpọ Dailymotion ma ọ bụ ọwa.
+ Kedu otu m ga - esi budata vidiyo ndị amachiri ma ọ bụ nkeonwe na Dailymotion n'ịntanetị?
Ọ bụrụ n’ịchọta ụfọdụ vidiyo na-adọrọ mmasị na Dailymotion, ma ịchọrọ ibudata ma ọ bụ tọghata ha na ngwaọrụ gị ozugbo, mana vidiyo a ka amachibidoro ma ọ bụ Video nkeonwe. Ikwesiri ịbanye na Dailymotion wee mepee mgbakwunye Chrome ma ọ bụ Firefox nyere anyị aka ịchọta njikọ nbudata vidiyo ahụ.
+ O lee vidiyo ole m nwere ike ibudata kwa ụbọchị site na Dailymotion?
Ebumnuche bụ ebumnuche anyị bụ imepụta weebụsaịtị iji nye ndị ọrụ niile ikpo okwu iji budata vidiyo kachasị amasị gị n'ịntanetị n'efu. Nwere ike ibudata ọnụọgụ vidiyo ọ bụla na Dailymotion ma ọ bụ weebụsaịtị na-ekerịta vidiyo na-enweghị mgbagha. Enweghị ego na enweghị usoro & Ọnọdụ zoro ezo na nbudata ahụ.
Dailymotion Video Downloader - Wayzọ Kachasị Ese vidiyo Na-anọghị
5 ndị ọrụ gosiri
Ọ bụrụ n’inwere anya ịnụ ụtọ vidiyo ọbụlagodi mgbe a na-anọghị n'ịntanetị, mgbe ahụ ntanetị vidiyo Dailymotion a na - akwụ ụgwọ bụ nhọrọ bara uru. Site na usoro nbudata ya ngwa ngwa ị ga - enwe ike ibudata ma lelee vidiyo kachasị ọhụrụ na mma gị.
Nbudata vidiyo adịbeghị mfe dịka enweghị edebanye aha ebe ọ bụla ị nwere ike jidere vidiyo Dailymotion. O juru m anya n’ihi na nbudata vidiyo kachasị amasị m n’ime obere nkeji.
Ọdịnaya nke Dailymotion Video Downloader dị mfe nghọta. Ana m akwadoro ngwa ọrụ a ka ndị niile hụrụ vidiyo Dailymotion n'anya.
Dailymotion Video Downloader bụ ọmarịcha ihe nbudata nwere ntụnye dị ọcha ma na-atọ ụtọ na ntinye ihe nchọgharị dabara adaba. M na-akwado ya n'obere ya.
Ọ bụ otu n'ime vidiyo vidiyo kacha mma m jiworo. Ọ bụ ngwa dị mfe ma dịkwa mma ị nwere ike iji ibudata vidiyo dị iche iche.
Ejiri m ndọtị a were budata vidiyo 4k ka ekiri na smart TV m. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Nke a bụ otu n'ime Ihe Ntanetị vidio Kachasị Ego nke Online iji budata vidiyo Dailymotion na PC ma ọ bụ Mobile gị.
Dailymotion videos Downloader na ntanetị 1080p 2021